Bengali Rohingya Terrorist Attack in Arakan, June 2012: ရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်းရှိ တက္ကသိုလ်နှင့် ကောလိပ်များ ဇူလိုင်လ ၁၆ ရက်နေ့တွင် ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်မည်
ရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်းရှိ တက္ကသိုလ်နှင့် ကောလိပ်များ ဇူလိုင်လ ၁၆ ရက်နေ့တွင် ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်မည်
ဆူပူ အကြမ်းဖက်မှုများကြောင့် ခေတ္တပိတ်ထားခဲ့ရသည့် စစ်တွေတက္ကသိုလ် အပါအ၀င် ရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်းရှိ တက္ကသိုလ်နှင့် ကောလိပ်များကို လာမည့် ဇူလိုင်လ ၁၆ ရက်နေ့မှစတင်ပြီး ပုံမှန်ပြန်လည် ဖွင့်လှစ်သွားတော့မည် ဖြစ်ကြောင်း ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ ပြန်ကြားရေးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက ဇူလိုင် ၉ ရက်နေ့က ပြောကြား လိုက်သည်။
စစ်တွေမြို့တွင် စစ်တွေတက္ကသိုလ်၊ နည်းပညာကောလိပ်(စစ်တွေ)နှင့် ကွန်ပျူတာကောလိပ်(စစ်တွေ)တို့ ရှိကြပြီး ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးမှ လာရောက် ပညာသင်ကြားလျက်ရှိကြသည်။ သို့သော်လည်း ဇွန်လဆန်းပိုင်းမှ စတင်ဖြစ်ပွားမှုများကြောင့် အခြေခံပညာကျောင်းများ အပါအ၀င် တက္ကသိုလ်နှင့် ကောလိပ်များကို ယာယီပိတ်ထားခဲ့ရသည်။ လုံခြုံရေး အခြေအနေကြောင့် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ရသော အရေးပေါ်အခြေအနေကို ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်း မရှိသေးဘဲ ညနေ ၆ နာရီမှ နံနက် ၆ နာရီအထိ ညမထွက်ရ အမိန့်ထုတ်ပြန်ထားဆဲပင် ဖြစ်သည်။
ယခုရက်ပိုင်းတွင် အခြေအနေပြန်လည် တည်ငြိမ်စပြုလာခြင်းကြောင့် စစ်တွေမြို့မဈေးကြီးအား ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီ ဖြစ်သော်လည်း လုံခြုံရေးတင်းကျပ်စွာ ချထားကြောင်း စစ်တွေမြို့ခံများက ပြောပါသည်။
“တက္ကသိုလ်နဲ့ကောလိပ်တွေကို လာမယ့် ဇူလိုင် ၁၆ ရက်မှာ ပြန်ဖွင့်မယ်ပြောပေမယ့် အခုထိအခြေခံပညာ ကျောင်းတွေမှာ ကျောင်းလာတက်တဲ့သူ မရှိသေးပါဘူး။ စစ်တွေနဲ့မောင်တောမှာတော့ မိဘတွေကစိုးရိမ်လို့ ကလေးတွေကို ကျောင်းပေးမတက်တာပါ။ တောင်ကုတ်၊ မာန်အောင်၊ ကျောက်ဖြူနဲ့ ဘူးသီးတောင်မှာတော့ ကျောင်းတက်နေကြပါပြီ။ တစ်မြို့နယ်လုံးတော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့။
ဆိုးတာကတော့ မောင်တောပဲ။ အဲဒီမြို့နယ်မှာ တာဝန်ကျတဲ့သူတွေ ဘယ်သူမှပြန်တာ မတွေ့ရသေးဘူး။ သူတို့လည်း သူတို့ လုံခြုံရေးအတွက် စိုးရိမ်မှာပေါ့။ လစာလေး မဖြစ်စလောက်နဲ့ အသတ်ခံရရင် ဆိုပြီး မသွားရဲကြတာ။ ပြီးခဲ့တဲ့ အရေးအခင်းမှာ မောင်တောမြို့နယ် ထဲက ဆရာဆရာမတွေ သတ်ခံခဲ့ရတာရှိတယ်လေ” ဟု စစ်တွေမြို့ရှိ Eleven Media Group ၏ သတင်းထောက်က ပြောကြားပါသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် လုံခြုံရေး အခြေအနေကြောင့် မောင်တောနှင့် ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်များ၌ ဇွန်လ ၈ ရက်နေ့ တွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပြီး စစ်တွေမြို့တွင် ဇွန်လ ၁၀ ရက်နေ့တွင် ထပ်မံထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
Posted by ကျောက်ဖြူသားချေ at 02:07
Copyright © 2011. Bengali Rohingya Terrorist Attack in Arakan, June 2012: ရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်းရှိ တက္ကသိုလ်နှင့် ကောလိပ်များ ဇူလိုင်လ ၁၆ ရက်နေ့တွင် ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်မည် . All Rights Reserved